ပို့စ်တင်ချိန် - 4/20/2014 09:32:00 PM
ဒီပုံကိုမြင်ရတွေ့ရတော့ ကျွန်တော် ဝမ်းနည်းတယ် ဒီနိုင်ငံနဲ့ ဒီလူမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲဆိုတာကလဲ ဒီနိုင်ငံမှာမွေး ဒီနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ ဒီလူမျိုးတွေမို့လို့ပါပဲ ဘာကြောင့် ရဲမဟုတ်တဲ့ ဒီနိုင်ငံကပြည်သူတွေက ရွံ့ရှာမုန်းတီးနေကြတာလဲ ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်တော်မမေးရဲဘူး ပြန်ပြောလာမဲ့ ပြန်ဖြေလာမဲ့ အဖြေတွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့သိက္ခာတွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှက်အကြောက်တရားတွေကို ချေဖျက်ပြစ်နိုင်တဲ့စကားလုံးတွေပါလာမယ်ဆိုတာကြိုသိနေလို့ပါပဲ အစွန်းနှစ်ဖက်ကြားမှာရပ်တည်နေရတဲ့လူတန်းစားကိုမီးစာတစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက်နည်းဗျူဟာနဲ့ထိန်းကျောင်းခံနေရသမျှ ပြည်သူကိုအပြည့်အဝမစောင့်ရှောက်နိုင်သလို ပြည်သူတွေရဲ့ရွံ့ရှာမုန်းတီးခြင်းကိုခံနေရမှာပါပဲ ။
၂၀၀၂ / ၂၀၀၃ လောက်က ရဲချုပ်စိုးဝင်းလက်ထက်လောက်ကပေါ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုပြီး အသွင်သဏ္ဍန်နဲ့အနှစ်သာရပြောင်းလဲရေးစီမံချက်ကြီးကိုဘယ်လိုပညာရှိတွေနဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲလိုက်သလဲမသိဘူး ရေးတော့ရေးလိုက်တာပါပဲ အဲဒိစီမံချက်ကြီးရေးပြီးသွားတော့ အောက်ခြေကိုချပြတယ် ပြီးတော့ ဘယ်လူကြီးလာလာအဲဒိဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့ စီမံချက်ကြီးကို အလွတ်ဆိုပြရတယ် (ကျွန်တော်ကကင်းစစ်ရေးပြအဖွဲ့မှာပါလို့ပါ) ဒီလိုနဲ့ပဲ ယူနီဖောင်းတွေအရောင်ပြောင်းလဲလိုက်တယ် ဝန်ကြီးကရဲချုပ်ကိုခိုင်းတယ် ရဲချုပ်ကတိုင်းမှူးကိုပြန်ခိုင်း တိုင်းမှူးကခရိုင်မှူးပေါ့ အဲလိုအဆင့်ဆင့် ပါးစပ်နဲ့အသွင်သဏ္ဍန်ကြီးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာ နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူတို့ပြောင်းခိုင်းသလိုပြောင်းဖို့ ငွေလိုလာတယ် ..အဲံဒိလိုငွေအတွက် ချဲဒိုင်တွေ အရက်ပုန်းဆိုင်တွေ ဖဲဝိုင်းဒိုင်တွေ အမှုသည်တွေအပေါ် လုံးလုံးတာဝန်ရှိသွားခဲ့ရတယ် သူတို့ကလဲငါ့သားလေးငါ့ညီလေးငါ့အကိုကြီး ဆိုပြီးချစ်လို့ခင်လို့ပေးတာမဟုတ်ဖူး သူတို့လုပ်ငန်းမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာစိုးလို့သောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ပေးရရှာတာလေ ...
ဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့သိက္ခာတွေ အရှက်တရားတွေ ကိုအထက်လူကြီးတွေရဲ့လိုအင်ဆန္ဒအရ ရောင်းစားလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ကြီးကို တကယ်ပဲအသွင်သဏ္ဍန်နဲ့အနှစ်သာရတိုးတက်စေချင်လား လွယ်လွယ်လေး ရော့ဒီမှာ လစာရိက္ခာ ဒီမှာနေဖို့ ဒီမှာဝတ်ဖို့ ဒီမှာလုပ်ငန်းအသုံးစရိတ် လုံလောက်လား တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်း ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးလုပ်ငန်း တွေဆောင်ရွက်ဖို့ဘာလိုအပ်သလဲ ပြန်တင်ပြ ။ ငါ့တို့ဖက်ကဖြည့်ဆည်းပေးမယ် အဲဒိလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့က မင်းတို့တာဝန်ပဲ တာဝန်မကျေရင်တော့ထိထိရောက်ရောက်အပြစ်ပေးအရေးယူမယ် ဒါပဲ ။ မလွယ်ဘူးလား မရှင်းဘူးလား ဟိုစီမံချက်ဒီစီမံချက်တွေလျှောက်ဆွဲမနေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တယ် စာရွက်ဖိုး ကွန်ပျုတာစာစီခ မိတ္တူဆွဲခ ကုန်တယ် ။ ဒီတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အမှန်တကယ်ပဲဒီတပ်ဖွဲ့ကြီးကို တိုးတက်စေချင်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား လုပ်ငန်းတစ်ခုခုခိုင်းလိုက်တိုင်းလိုအပ်လာမဲ့ လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်တွေကို ဒုစရိုက်သမားတွေဆီကရှာလိမ့်မယ် ...
ဒါဆိုရင်ဒီတပ်ဖွဲ့ကြီးပြည်သူကြားမှာတောင်ရမ်းစားသောက်နေရလိမ့်မယ် ဒီတော်တပ်ဖွဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျလိမ့်မယ် အများအမုန်းကိုခံရလိမ့်မယ် အများပြည်သူတွေရဲ့ရွံ့ရှာခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် ။ ဒါမှ ပြည်သူနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ပေါင်းစပ်လို့မှမရပဲ အငြိုးအတေးတွေဖြစ်လာမယ် ဒီတော့အဲဒိအင်အားနှစ်ရပ်မပူးပေါင်းသေးသရွေ့ငါတို့လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ နေမဝင်ဗျူဟာအတိုင်းများ ကျင့်သုံးနေခဲ့သလား ? ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော်လှန်ခဲ့ဖူးတယ် သူပုန်ဗိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့ ဗိုလ်မြက ရဲဒုတပ်ကြပ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ဒီတော့ အဲလိုမဟုတ်မခံပြန်တော်လှန်တတ်တဲ့ ဒုတိယလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကြီးကို ဂုတ်ချိုးနှိမ်ထားမှသာ ငါတို့နောင်ရေးစိတ်အေးရမယ် ဆိုတဲ့အတွေးစိတ်ကူးမျိုးဘယ်သူတွေးဖူးမလဲ? ဆိုတာကျွန်တော် စဉ်းစားမိတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတိုင်းမှာဆဲလ်တွေသွင်းထားခဲ့တယ် ။ second way ဆိုတာမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေ ထားပါတော့ ဒါတွေဆက်ပြောရင်ကျွန်တော့်အတွေးတွေကကုန်ဆုံးသွားမယ်မထင်ဘူး ။ အဓိကပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ မိဘပြည်သူတွေအခုချိန်ထိရန်တိုက်ပေးခံနေရတုန်းဆိုတာပါပဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တိုင်းတပ်ဖွဲ့မှူးနဲ့အထက်အရာရှိကြီးများက အများပြည်သူနဲ့စကားပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့နေရာ အရမ်းသိမ်မွေ့လွန်းတယ် အရမ်းသီးခံနေလွန်းတယ် အရမ်းချိုသာလွန်းတယ် ဒါပေမယ့်အဲဒိလူကြီးတွေရဲ့ အောက်ခြေကိုပေးတဲ့အမိန့်မှာ ပြင်းထန်းလွန်းနေတာဟာ ရှေ့တစ်မျိုးကွယ်ရာတစ်မျိုးဖြစ်နေသလို အောက်ခြေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်စစ်တွေနဲ့ ပြည်သူကိုအံချော်စေသလိုပါပဲ အောက်ခြေကပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတော့ အကြိမ်ကြိမ်ညွှန်ကြားထားသော်လည်း လိုက်နာမှုမရှိ ဆိုပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူပြလိုက်တယ် ဒါဟာ ထိုးကျွေးတာပဲ နေပြည်တော်ဖြစ်စဉ် မအူပင်ဖြစ်စဉ် တွေကိုပဲကြည့် ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်အိမ်ကြက်ဘဝကအမြန်လွတ်မြောက်ချင်နေပါပြီ ကဲခင်ဗျားတို့ရော ။
အိုးမဲအသုတ်ခံနေဦးမှာလား မျက်စိဖွင့်ကြည့်ပေးပါ ။ နားတွေစွင့်ထားပေးပါ ။ ဒီလိုပြောလို့ ငါတို့က ထတော်လှန်ရမှာလား ဆိုပြီးတောင်တွေးမြောက်တွေးလျှောက်မတွေးနဲ့ဦး ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောက ရဲဆိုတာကလဲ ဒီနိုင်ငံက ဒီလူမျိုးထဲကပေါက်ဖွားလာတာပါ ။ အခြားတိုင်းပြည်ကလာအုပ်ချုပ်တဲ့ ကျူးကျော်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပိုက်ဆံတောင်းနေတာများတွေ့ရမြင်ရရင် ဒီရဲဒုက္ခရောက်သွားအောင်တိုင်လိုက်တာထက် ဘာကြောင့်တောင်းနေရလဲဆိုတာကို အခြေခံကျကျနားလည်သိရှိအောင် လေ့လာပြီးပြုပြင်ဆုံးမပေးပါလို့ ကျွန်တော်ကတောင်းပန်ချင်ပါတယ် ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ပြည်သူဆီကတောင်းလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ပဲ ပြည်သူ့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ရပါတယ် ။ အခုလဲဒီအတိုင်းပါပဲတောင်းနေရတုန်းပါပဲ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတိုက်ဖျက်ရေးဘာအဖွဲ့ညာအဖွဲ့ဆိုတာကြီးပေါ်လာလို့ မတောင်းရတော့ဘူးလို့တထစ်ချမယူဆပါနဲ့ဦး အခုချိန်ထိ လှည့်ကင်းလှည့်ဖို့ နိုင်ငံတော်ကဘာတစ်ခုမှထုတ်မပေးနိုင်သေးပါဘူး စက်ဘီးတွေဝယ်ဖို့တင်ဒါခေါ်တုန်းပဲရှိပါတယ် ။ ယူနီဖောင်း လက်ထိပ် စကားပြောစက် ချပ်ဝတ်တန်ဆာ ဘာတစ်ခုမှအလကားမရသေးပါဘူး ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တောင်းနေရဦးမှာပါပဲ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အမိန့်က ဟိုးအရင်ကအတိုင်းပါပဲ ။ မိုက်ကရိုဖုန်းရှေ့မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့စကားတွေကြောင့် အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီလို့ မထင်ပါနဲ့ အဲလိုထင်လိုက်ရင် ခင်ဗျားလူလိမ်ခံလိုက်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါ ။ စကားလုံးလှအောင်ပြောဖို့ကလွယ်ပါတယ် ။ အလုပ်တွေလှပဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။
မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်မှာ လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။(Real Felling)